Terrorist kurwisa 24 Oktoberplein muUtrecht, inotyisa munyika yose! : Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 18 March 2019	• 35 Comments
Mangwanani ano kwaizova nekurwiswa kwegandanga muUtrecht. Hatizivi chimwe chinhu, kunze kwekuti tinoverenga, kunzwa uye kuona bombastic nyaya munhau. Pangadai pave nokupfutirwa pa tram pairi 24 Oktoberplein. Iko kwave ikozvino kwave kwakarwiswa pane imwe nzvimbo paTrumanlaan muUtrecht. Ikoko kunoratidzika kuva ne 1 mutengesi. Zvisinei, panewo nyaya pamusoro pevashandi ve4. Mapurisa akanga achitsvaka Renault Clio tsvuku. Mapurisa haadi kutaurira chero chinhu pamusoro pevarwere, asi avo vanenge vatorwa vaizoendeswa kuchipatara chinokurumidzira. Uye saka nyaya yacho inokura uye inowedzera kuvhiringidzika. Zvose zvinonzwika zvakanyanya uye zvakakomba, asi izvi ndizvo zvinangwa.
Iyo inyaya inonakidza inega uye zvishoma tinowana kunzwa kuti kutya kunenge kuchiripo uye kuti kunogona kungobuda chero nguva uye chero kupi zvako. Hatifungi maitiro emagreencreen uye haufaniri kufunga nezvekuita kwehupenyu, sezvatagara tichiratidza pano panzvimbo ino, sezvinoitwa ne Pegida-Antifa kuratidzwa kana pa Zaanse vloggersrel (yakazara zvachose). Chero zvazvingava, mhizha inotyisa inotyisa uye vanhu vari kudanwa kuti vaise chero zvinyorwa zvepawebsite yepurisa. Izvi zvinowanzopa zvakasimba kumufananidzo wekuvimbika. Hapana angashamisika kana mifananidzo yakakonzerwa yevatori vechikamu mu PsyOp (kushanda kwepfungwa) ingave kana kuti pamwe yakashandiswa pamwe ne software.
Munyika inoputika nemitambo yezvikoro uye Inoffizieller Mitarbeiter unogona nyore kuisa mamiriro ezvinhu akadaro muchiitiko, kunyanya kana iwe ukaisa kurwisa munzvimbo iyo kazhinji isina vanhu vazhinji vanouya. Iyoyo nyaya yekuderedza nzvimbo uye kubvumira boka revatambi kuita basa ravo. Ndine chivimbo chikuru mumamiriro ezvinhu akadaro, nokuti kazhinji inowanzoti 'Dambudziko, Reaction, Solution'yakazara zvakakwana. Iva nechokwadi chekuti pane dambudziko mamiriro ezvinhu, zvinoita kuti zviitike kuburikidza nevhidhiyo (izvo vanhu vanonyanya kutamba pamanzwiro) uye zvino iwe unopa mhinduro iyo inotanga mamwe 'mapurisa enyika mune jekete rehukama'.
Tiri kuenda kuona zvifananidzo uye tichazoona manhunt. Zvichida iyi ndiyo kutanga kwei-anti-Turkey kutyisa kubva kune zvakanyanya kukodzera zvandakazivisa (ona ichi chinyorwa). Munguva iyi, kutaurwa kunoitwa neA37-murume wekare wokuTurkey anonzi Gökman Tanis. Tichaenda kunoona FETO link yandakataura munyaya yacho (maererano nekurwisa kuNew Zealand)? FETO inotora boka raTuthullah Gülen, sezvinotsanangurwa neTurkey.
Vazhinji vevanhu havazokwanisi kutenda kana kunzwisisa kuti hurumende, pamwe nekubatana nemarudzi ese emasangano (kusanganisira mapurisa uye vezvenhau, dzidzo yemitambo uye Inofizieller Mitarbeiter, nezvimwewo) ichakwanisa kuisa kutya kwakadaro pachigamba. Ndizvo nokuti vanhu vachiri kudavira muTurumanshow yezvinobudisa nhau (iyo Trumanlaan muUtrecht yakanyatsonaka mumamiriro ezvinhu akadaro). Vashomanana vakatora kufunga nezvemamiriro ezvinhu akaiswa munzvimbo uye izvo zvakaratidzwa pano panzvimbo. Vanhu havakwanisi uye havadi kutenda kuti hurumende, vagari venyika pamwe chete nevhidhiyo vanogona kunyengedza zvinhu mukutsinhana nebasa, bhegi remari uye pasi peanbi yekuwana 'chinangwa chakakwirira'. Sangano rezvemagariro ehurumende mauto akagadzirira kurwisa ani naani anotya kupokana nyaya yacho, anogadzira boka raidiwa neboka.
Ndezvipi zvinoita madzimai nevatendi vane? Semuenzaniso, unogona kugadzira vanhu vasiripo kubva pakatarisana neAI software.
Iwe unogona kuita mavhidhiyo akakwirira.
Iwe unogona kushandisa mashizha ebrini
Iwe unogona kukwereta vateereri uye mumasangano akafanana nemapurisa, zvipatara uye nhepfenyuro iwe wakakanganisa vanhu vanoita basa mukuita. Ndiani anoita chinhu chakadaro? Unoziva here kuti vanhu vangani muvakidzani vedu vekumabvazuva vakaita mabasa ese emitambo ye propaganda makumi mashomanana akapfuura? Chero bedzi vanhu vachibhadharwa uye vanogona kukwira, pane vazhinji vanorega bhandi vachiita bhizinesi uye vanochengeta miromo yavo yakavharwa kune dzimwe nyika. Kana iwe usingatendi izvozvo, hauna kudzidza zvinyorwa zvakanaka. Iwe pachako uchange uchitamba nechitarisiko chevhidhiyo kuti uchengetedze kutya mukati maro, kuitira kuti hurumende inogona kuramba ichizviumbira.
Izwi rinoshamisa kubva kune anonzi "unozvionera." de Telegraaf ane zita rinonzi Koster akataura chimwe chinhu chinotyisa:
De Koster: "Ndakauya kubva kubasa rangu pazvaitika. Ndiri kumira pamagetsi emagetsi pa 24 Oktoberplein uye ndinoona mukadzi akarara pasi, ndinofunga kuti ari pakati pe20 nemakore 35. Panguva iyoyo ndakanzwa pang pang pang katatu. Varume vana vakanyatsomhanya vachienda kwaari uye vakaedza kumudhonza kubva ipapo uye ndakanzwa pang pang pang zvakare uye avo varume vachirega kuenda kumukadzi uyo zvakare. Mhirizhonga kwazvo ipapo. "
Saka mukadzi wacho akanga atovapo apo kuurayiwa kwakaitika? Strange. Iwe unoziva chii. Iyo imwe nyaya uye saka tichazonzwa dzimwe nyaya. The Trumanshow inofanira kuenderera mberi:
(Iwe unoverengawo Nyaya yapfuurapamusoro pekurwiswa kweNew Zealand kuti vanzwisise zviri nani zvemazuva ano anotyisa)
Source chinyorwa listings: telegraaf.nl, indebuurt.nl
Tags: 24, 37, kurwisa, mutadzi, Featured, Fethullah, FETO, akanzwa, zvapupu, Gokman Tanis, Gülen, year old, murume, October makirati, shots, kutya, kugandanga kwegandanga, ugandanga, chitima, Trumanlaan, Turkish, Utrecht
Ndinoziva kuti iwe unofarira numerology.
Harry S. Truman aiva mukuru wehurumende yeAmerica aishanda semutungamiri we33rd weUnited States,
Chikoro che33, zvinoratidzika kuti Ides yaMarch yakazara nesimba rakazara. Ngatione kana tikatarisira kuti 22e isvike pachiguma.
"Kunyange zvakadaro, nei nzvimbo yakatarwa mushure mezuva 24 October? Pane chinhu chakakosha chinoitika musi iwoyo here? Hongu! Musi waOctober 24 1945, nhasi chaiyo 73 makore akapfuura, United Nations yakatangwa. Kare munguva yehondo mazano akaumbwa kune sangano renyika dzakawanda rakatevera rugare, kuchengeteka uye kubatana pakati penyika. Ichangotevera Hondo Yenyika Yechipiri, pana 24 October 1945, nguva yakanga yasvika: United Nations yaiva chokwadi. "
Uye zvechokwadi mapurisa ari kudana kuti hapana mifananidzo inofanira kuiswa kune zvekugarisana nevamwe: anbi yekutsoropodza anenge atoiswa.
Zvakanaka vateereri vanoiswa panzvimbo, asi vanenge vachitya kuti vanhu vanotanga kupfurikidza
Zvandiri kushamisika ndezvekuti zvinokwanisika sei kuti vese vashandi vekhamera vangave varipo pamba pese kupambwa? Ko, mapurisa anotora mapurisa akazarura zvizere panguva yekutya kwemagandanga kuitira kuti magandanga anzwe zvakare pamwe chete? Kana kuti madzimai nevakuru vanowana chirevo here? "Uyai kune huppelepup musikana, nokuti tava kuzoita imwe nharo"
Zvose zvinoratidza PsyOp.
Calvin akanyora kuti:
Iwe uchiri kuona kuwirirana nesitevero remazuva ano here? Iwe unofunga kuti zvakare ndezvakaitika here kuti nhau dzakanyanyiswa zvachose pasi ... kana kuti dzakakwanisa kushandisa tsananguro munyaya iyi here?
Chikwata cheAmsterdam chave chakaita kuti zvive nechokwadi chekuti matamende muUtrecht akanga asina kunyanya kuzadzwa kupfuura mazuva ose
Ini zvino ndaona kuti yakanga iri nyika inotyisa, saka zvakare muUtrecht.
Izvozvo hazvigone kusanganisa uye pasina mubvunzo vakavimbisa kuti vafambi vakawanda vakatsvaga kutakura zvakasiyana kana kuti vakangotora zuva. Yakagara ichiziviswa mberi.
Chimwe chiratidzo chekuti tingave tichishanda nePyyOp yakanyatsogadzirirwa.
chaizvoizvo, hazvigone kushamisika kuti chirongwa chikuru ichi chakaitika chaizvo pazuva re "tereur".
Musoro wehofisi ye (semi) yehurumende yemu NS iri muUtrecht, manheru ano tichaona uyu mushandi weYunivhesiti yeUtrecht zvakanyanya
Chris34 akanyora kuti:
Nhau dzeChipupuriro dzisina kururama, vanhu vakawanda vanoti vanonzwa shots, kusanganisira vatyairi.
Uyezve mutambi uyu ari paRTL. "Ndinofunga kuti paiva nemucheri pairi. Panzvimbo pekurira kukuru, ndakanzwa kuputika kuchikomba. "Maererano naDaan, zvaiita sokuti kurwisa kwakasimba mukadzi uyu.
Zvakanaka kuti vashambadziri vakawanda pamigwagwa yepamusoro nepamusoro pese ruzha mumotokari yavo vanonzwa mumwe munhu achipfura necheri ...
"Mahofisi eUtrecht akambomira vanhu kuti varambe vari mumba. Van Zanen: "Takaita izvozvi nokuti taifunga kuti chiitiko chepfuti chaizoitika munzvimbo dzakawanda. Izvozvo hazvisizvo, sezvatinoziva iye zvino. Mumwe anongoramba ari mumufananidzo, vari kutsvaga, haasi mukati. Ikoko kunogonawo kuva nevanokanganisa, kusvikira zvino hatizivi izvozvo. "
Ndinofunga kuti ivo vakatora zvizere zvekamera kuitira kuti izvi zvisinganzwisisiki kune imwe nzira yePeople and PsyOp.
Martin iwe unoziva zvakawanda nezveizvi?
Kuvandudza 16.24: Maererano nehuchapupu mupurisa akadanidzira 'Allahu Akbar' asati avhura moto muchitima. Mumwe mutakuri uyo akadana kuti ave muMorocco akasara ari oga, maererano neHet Parool. Isu tinoda kuziva kuti ndiani wehutongi hwakarongwa ndiye wokutanga kusimbisa kuti haina chokuita neIslam.
Ona yako ingano yako mushure mokunge mushure mokutaura. Nhoroondo isinganzwisisiki. Zvapupu zvinotaura nezvevashandi ve4 vane zvombo zvekare uye mpfuti ... .. Asi vane 1 mupomerwa mupfungwa
Ndapota ndibatsirei ini ndisinganzwisisi. Chii chinoratidza kuti chii chingave chakaitika chine chokuita ne'ugandanga '? Sei usiri kuburikidza nehutongerwo hwehupfumi kana nyaya dzinotyisa?
Isu tose tinopenga pamusoro pevatenzi vehurukuro?
Ndinonzwisisa kuti mutambudzi akabatwa nekukudzwa kukudzwa.I "vavhimi vemagandanga" vakabuda kunobata shumba uye vakawana hove. Itya zvinonyadzisira muHolland. Nyora fimscript uye uitengese kuHollywood. Inyika ipi.
Itya zvinonyadzisira muHollandia.
Ini ndiri wose shit anorwara nezvinhu zvose, zvakanyanyisa.
Kana iwe uchida kugadzirisa chimwe chinhu chakadaro, ita zvakanaka saka usati uite bhidhiyo yakashata kudaro b b.
Izvo kuti rutte haigoni kuvadzivisa. Zvakaipa zvakadini
Kungofanana nomutambi uyu muNewzealand ... kunei mavharo akabatanidzwa mumadziro, aripi ropa riri parusvingo ....
Vakafa vakanga vatotanga pasi vasati vauya muL Wolfenstein 3D.. uye iye zvino mifananidzo yose inobviswa kubva pa internet zvakanaka
Makwai ari mukutya kukuru zvisati zvaitwa sarudzo uye zvechokwadi vanoda mufudzi akanaka .. FVD inotungamirirwa nehurumende huru kukunda?
"Mapato ose ezvematongerwo enyika, kunze kwe Forum for Democracy, anomisa chisarudzo chekusarudzwa mumhanyi-kusvika kuChitamende yeChechi yeChitatu maererano nekurwisa."
Kamwe kamwe ndinowana deja vu kunzwa. Yeuka mubvunzo weyo muturi weTurkey uyo akapinda muchivande muNetherlands. Mhirizhonga, nezvimwewo. Rutte akabva akunda sarudzo. Akange aita "chivimbo" pamusoro pevaTurkey. A pair of Rutte naErdogan kare kare?
Kunyatso 😀 iyi Psyop ine maonero akawanda uye ndeimwe yei ..
Nokudaro, uyo anokanganisa PsyOp actor anobatwa. Zvakanaka kuti isu tichiri tine mapurisa makuru akadaro. Chii chavakaita zvakanaka, "vashandi pamwe chete"; "Vakomana vedu". Matanho anotyisa ari kubereka michero!
.. Chikamu chinotevera ndechekuti zviyero zvebiometric, zvechokwadi hatigoni kurega izvi zvichienda nenzira yedu .. Rutte inokurudzirwa ku Politburo muBrussels kuchengeta shamwari yake shamwari yeTimmermans company. Mapurisa anotarisa matanho anotorwa kuburikidza neU. EU pamwe nekubatana neFrontex, EUROGendfor yakaiswa uye inofanana nePurisa 2.0 inoshanda semutambo, nokuti ichaitika zvakare kuitira kuti tisambokanganwa ...
chris-mwana akanyora kuti:
Kugamuchirwa ku jungle, mhirizhonga iri kuuya kuzotarisa. US iri kuisa nyukliya mabhomba muEurope vhiki rino, kukwikwidzana neTurkey kunogona kuwedzerwa zvakare muzhizha, vaAmerica vakasiya musangano weUnF uye varikudziridza mhirizhonga inofambidzwe, kusagadzikana kwakakwana kuti kuve neuto reUnited States chero zvakadaro, idzi heroes idzva dzinogona kubuda pakarepo kutora jaketi.
Nenzira, wakamboona zvakanyorerwa pfuti zveNew Zealand attack? Nhoroondo yechidzidzo kwemazana emakore muEurope vs Ottoman Empire
Breivik Tarrant Copy Cat akadzidziswa nevanowanzofungidzirwa avo vakashandisa Breivik sechinhu chinobatsira. Migwagwa yose inotungamirira kune zvinowanzofungidzirwa kunze kweUtrecht kupfuura pane iyo yakagadzirirwa mutsara.
France 2019, iyo yeNyika World Order agenda
Kuvharidzira ndeye / ndicho chinhu chinoita simba ravo kuitira kuti hongu zvose zvigone kuita kuti tive nokutenda, hatigoni kuva nemhando iyo yezvakaipa zvekuputika kwemafuro panguva yaCharlie Hebdoo, zvechokwadi, madzinza akaona zvose Charlie Hebdoo kupfura zvakaratidzwa, pano pano akakurukura zvizhinji.
Nils akanyora kuti:
Mufananidzo wako unobva kuna John Maes, Telegraaf. Rimwe peji re Wikipedia rekurwisa uku rave rakasikwa, zvirokwazvo, mukati mezuva, rine mufananidzo iwoyo. Wiki haina kutumira mapikicha ane kodzero isina kubhadhara. Muchidimbu, tinoonazve huddle yemabasa ekuvanda uye mhizha mune inopikisa encyclopedia yekurara Netherlands. Saka 100% zvechokwadi fake mureza.
Zvinoshamisa kuti mumwe munhu anofanirwa kuvharirwa uye mhombwe werudzi rwakakwana anogona kumirira mutongo kumba.
Ini zvino ndinotora Folkert de G pfungwa.
Ndinowana wakafa zvakanyanya, hama inotevera inofanira kurarama neizvi.
Ndiri kuziva kuziva kuti mutemo mutsva uchabuda neizvi.
Mutemo mutsva wokugadzirisa vagari vemo asi kwete kugadzirisa mhaka, nokuti tinofanira kunge tichikwanisa kuishandisa.
Tinofanira kukwanisa kutaura kuti mutemo wakanaka.
Zvematongerwe enyika zvakaipa asi kururamisira kwakaipa !!
« New Zealand attack: tsanangudzo yekugadzirisa nyika yose, kusagadzikana kwevanhu uye kuparadzanisa
Anopomerwa mutadzi Gökmen Tanis akasungwa, zvichida mutambo wemhuri »
Total Visits: 11.612.940
Itai 1.614 vamwe vanyori